Sunday September 08, 2019 - 21:06:53 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya deegaanka Buurane oo qiyaastii 3KM dhanka galbeed uga beegan degmada Mahadaay ayaa sheegaya in halkaas maanta qaraxyo lagula beegsaday ciidamada Burundi ee qeybta ka ah soo duulayaasha AMISOM.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu sheegay in ugu yaraan 5 askari oo Burundeys ah lagu dilay qaraxyo is xigxigay oo ciidamada Burundi ku qabsaday meel ku dhow saldhigga ay ku leeyihiin deegaanka Buurane.
"Mujaahidiinta ayaa qaraxyo ku weeraray ciidamo katirsan saliibiyiinta Burundi ee saldhigga ku leh deegaanka Buurane ee wilaayada Shabeellaha dhexe, macluumaadka hordhaca ah ee aan helayno waxay sheegayaan in 5 katirsan ciidamada Burundi ay ku dhinteen qaraxyo barakaysan oo mujaahidiintu labeegsadeen cadowga" ayaa lagu yiri war kooban oo Al Shabaab kasoo baxay.
Ilo wareedyo madax banaan ayaa sheegaya in khasaaraha badan uu ka dhashay qaraxa labaad oo haleelay ciidamo lugaynayay oo usoo gurmaday ciidamo kale oo qaraxa koowaad lala beegsaday.
Waa khasaarihii ugu xooganaa oo bishaan gudaheeda ciidamada Burundi kasoo gaara dagaalka ay uga jiraan dalka Soomaaliya weeraro bilihii lasoo dhaafay ka dhacay isla gobolka Sh/dhexe ayay ku waayeen tobaneeyo askari iyo gaadiid gaashaaman.